Amafutha e-YM BC ngamakati avela ku-lichen
I-ringworm ibhekisela ezifweni ezingenakuholela kuphela ekumpumpheni kati, kodwa nasekufeni. Ama-spores angathintekile angathathwa isilwane esiphelele. Ingozi akuyona nje kuphela impilo yezilwane, kodwa ezinye izinhlobo zezinyosi ziyadluliselwa kubantu, ngakho-ke unake ukunakekelwa okukhethekile ngesikhathi senqubo.
Yini okufanele ngiyenze uma nginekati?
Ukunambitha, ukuqhuma - izimpawu zokuqala zenkinga, ngokushesha uthintane nodokotela wezilwane. Hlukisa isilwane, ungageza noma usihlanganise nesilwane, ungagcisa nje isimo ngokusabalalisa isifo kulo lonke umzimba.
Njengoba sekushiwo kakade, isinyathelo sokuqala ukuya kudokotela wezilwane. Ngokuvamile amafutha e-topical application anqunywe. Khumbula ukuthi udinga kuphela ukusingatha isilwane ngeglavu. Wonke amaphuzu othintana nesilwane kumele avezwe nge-disinfected. Abantu abanezinwele ezidinga isikhathi eside badinga ukusika iziboya zoboya eduze nesilonda. Bona ama-flakes amakhulu nawo asusiwe. Ngokusobala isilwane sizozama ukukhohlisa amafutha. Ukuvimbela lokhu kungenzeki, kungenjalo ngeke kube nomthelela owenziwe ekwelapheni, faka imbumbulu noma ikolishi ekati imizuzu engama-30. Uma icala liqalisiwe noma izinkinga zikhula, ama-antibiotic angase abekwe.
Amafutha YM BC ngamakati: izici nokusetshenziswa kwezidakamizwa
Amafutha e-YM BC amakati athola ngokugcwele i-eczema, i- demodectic , enqabe. Ukusebenza kahle kwezidakamizwa kunikezwa inhlanganisela ye-salicylic acid, isulfure, i-tar, i-lysol, i-zinc oxide, i-turpentine. Ukuxuba okufanayo kunikezwe umphumela wokuzibulala futhi we-acaricidal esakhiweni sezilonda ngamagciwane anegciwane.
Isimiso sokusetshenziswa silula: udinga ukufaka amafutha emanzini athintekile ngokuthunjwa kwe-2-4 cm nxazonke kwilonda. Umkhiqizo kumele uhlotshwe ngokucophelela. Ukwelashwa kuzohlala okungenani izinsuku ezingu-7-10 nesicelo kabili ngosuku. Ekupheleni kokwelashwa, ukumboza izinwele kuzoqala futhi, isilonda sizophilisa, ama-crusts akhayo azovela. Esikhathini sokugcina, kubalulekile ukuhlola le ndawo yesikhumba ngokuhlolwa okukhulu. Uma ama-microorganisms enonya atholakele, inkambo yokwelapha iphindwe noma ingenziwa esikhundleni / isongezwe ngezinye izindlela.
Amafutha e-YM BC kubhekwa njengephephile ezilwaneni, kodwa kungcono ukungayisebenzisi ezindaweni ezibucayi. Isibonelo, ukushisa kungahlala ezindlebeni. Ungasebenzisi lesi sidakamizwa ngokungahambisani nomuntu siqu nezilwane zenye yezingxenye ezisetshenziselwa amafutha.
Izinja ezithembekile kakhulu
Yini okufanele ngiyenze uma ikati lami lisendlini?
Ibukeka kanjani njengamakati?
Uma ama-kittens ashintsha amazinyo abo - kanjani ukuqinisekisa ukunakekelwa okufanele?
Amazambane "Bellarosa" - incazelo yezihlukahlukene
Kungani umntwana ekhafulela ngemuva kokudla?
Ungathola kanjani isitifiketi sezimali zokubeletha?
I-Agama ye-beard - indlela yokugcina izindlu ngokufanele?
Ingabe kulungile kumama obeletha nge-bilberry?
I-Darsonval ebusweni - zonke izimfihlo zenqubo kanye namadivaysi amahle kakhulu ekudleni
Ukwazi kanjani isipele sothando ngenyanga?
Ungathola kanjani ulimi oluvamile nabantu?
Ingabe i-schizophrenia iphathwa?
I-Casserole evela enkukhu enenkukhu
I-stew of zucchini - zokupheka okumnandi kunazo zonke zokudla okulula ekhaya
Yini abantu emazweni ahlukene abanganelisekile?
Isobho nge-courgettes kanye noshizi